သင်၏ Android | မှအလုပ်များကိုစီမံရန်အကောင်းဆုံး application များ Androidsis ပါ
ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်သောအချိန်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးအရာများအတွက်ပိုမိုလွတ်လပ်သောအချိန်ရရှိရန်အခြေခံသော့ချက်တစ်ခုဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းများကိုလွယ်ကူမြန်ဆန်မြန်ဆန်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြင့်စီမံခန့်ခွဲပါ.
နည်းပညာအသစ်များတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်ရှိဂန္တ ၀ င် "လုပ်ဆောင်မှုစာရင်း" သည်များစွာပြောင်းလဲခဲ့ပြီးယခုကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်အလုပ်များကိုအိမ်၊ အိမ်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ Android ကိရိယာများမှတစ်ဆင့်စီမံနိုင်သည်။ tags များထည့်ခြင်း၊ ရက်စွဲ (သို့) တည်နေရာပေါ် မူတည်၍ သတိပေးချက်များနှင့်သတိပေးချက်များကိုဖန်တီးပါ ဒီနေ့ Android မှာအလုပ်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အကောင်းဆုံး application အချို့ကိုပြပါမယ်။ ဒါပေမယ့်သင်အမြဲတမ်းရှိရမယ်။ သင်သည်သင်၏ system ကိုတွေ့ပြီး၎င်းနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိမှသာအကျိုးကျေးဇူးများကိုစတင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည် task manager ကိုအသုံးပြုရန်။
1 သင်၏ Android မှအလုပ်များကိုစီမံပါ
1.5 ငါ xnumxdo
သင်၏ Android မှအလုပ်များကိုစီမံပါ
အထူးသဖြင့်စည်းရုံးရေးအတွက်ရုန်းကန်နေရသူများအတွက်ဖွဲ့စည်းခြင်းသည်အခက်ခဲဆုံးသောအရာဖြစ်သည်။ သို့သော်ဘ ၀ ၌အရာအားလုံးမည်မျှသေးငယ်သည်ဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့်အမျိုးအစားတစ်ခုလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်လုပ်ရမည့်အရာများကိုခြေရာခံရန်လိုအပ်သည်။ သင်လုပ်သမျှအားလုံးအပေါ်သင်ထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ တကယ်တော့၎င်းအဆင့်သို့ရောက်ရန်လည်းမလိုအပ်ပါ။ သငျသညျဖြစ်ကောင်းသေးငယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူအများကြီးပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက် Android မှအလုပ်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အကောင်းဆုံး application အချို့ကိုလေ့လာကြည့်ကြပါစို့။ သို့သော်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမမေ့ပါနှင့်။ အကောင်းဆုံးနှင့်အပြည့်စုံဆုံး app သည်သင်လိုအပ်သော application တစ်ခုမဟုတ်ပါ။
Any.do သည်အလုပ်များကိုစီမံရန်လူကြိုက်အများဆုံး application တစ်ခုဖြစ်သည်။ သငျသညျပုံမှန်အတိုင်းဖန်တီးနိုင်ပါတယ် အလုပ်များ၊ လက်ခွဲများနှင့်မှတ်စုများ ဒါကြောင့်သင်လုပ်ရမယ့်အရာကိုမမေ့ဘူး။ ထို့အပြင်ကကမ်းလှမ်းခဲ့သည် တိမ်တိုက်မှတဆင့်ထပ်တူပြုခြင်း သင်၏အလုပ်များကိုသင်၏စက်ပစ္စည်းအားလုံးတွင်ခြေရာခံနိုင်သည့်နည်းဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။
ထို့အပြင်၎င်းတွင်ရှိကြောင်းမမေ့နိုင်ပါ သပ်သပ်ရပ်ရပ် interface ကိုရိုးရှင်း။ အစွမ်းထက်သည်၊ ပြက္ခဒိန်အတွက်အထောက်အပံ့နှင့်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်အများစုသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
Any.do - Tasks + Calendar
ရေးသားသူ: Any.do လုပ်ရန်စာရင်းနှင့်ပြက္ခဒိန်
မဆိုသံသယမရှိဘဲ, Todoist ဖြစ်နိုင်ဆုံးအရှိဆုံးနှင့်အစွမ်းထက်အလုပ်မန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ် ကြောင်းတည်ရှိ။ ၎င်းတွင် Android နှင့်ကျန်မိုဘိုင်း operating system များအတွက် application များရှိပြီး web ဗားရှင်း၊ Chrome နှင့်အခြားအရာများအတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်အလုပ်များကိုဖန်တီးနိုင်သည်၊ စာတန်းများ၊ စီမံချက်များကိုစီမံနိုင်သည်။ ၎င်းတွင်အော့ဖ်လိုင်းစနစ်၊ လွယ်ကူသောအလုပ်အမျိုးအစားခွဲခြားရန်အတွက်တံဆိပ်များနှင့်အဝင်ဘောက်စ်များ၊ Android Wear လိုက်ဖက်မှု၊ အသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့် ထူးခြားတဲ့ 'Karma' စနစ်သို့မဟုတ်သင်ဆက်လုပ်ရန်အားပေးနေစဉ်သင်မည်မျှအကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်ကိုမြင်ယောင်စေနိုင်သည်။ သငျသညျ subscription ကိုပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အင်္ဂါရပ်များအပေါငျးတို့သပျော်မွေ့လိုလျှင်, အခမဲ့ဗားရှင်းသုံးစွဲသူများအဘို့အလုံလောက်ထက်ပိုပြီးဖြစ်နိုင်သည်။
Microsoft ၏လက်များတွင်၎င်းသည် multlatlatform support နှင့်အခြားအက်ပ်များမှမြင်ရသည့်အခြေခံအင်္ဂါရပ်များနှင့်သင်၏အလုပ်စာရင်းများကိုစုစည်းရန် folder function တစ်ခုရှိသည်။ အကောင်းဆုံးက၎င်း၏ဘက်စုံဖြစ်ပါတယ်: အလွန်အစွမ်းထက်သို့မဟုတ်အခြေခံအသုံးပြုရန်အတွက်အလုံအလောက်ရိုးရှင်းနိုင်ပါတယ်.
Wunderlist - စာရင်းလုပ်ရန်
ရေးသားသူ:6Wunderkinder GmbH သည်
To Do List သည်ဤရွေးချယ်မှု၏အခြေခံအကျဆုံး task manager ဖြစ်သော်လည်း၎င်းတွင်အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးရှိပြီးကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်သန့်ရှင်း။ သုံးစွဲရလွယ်ကူသောဒီဇိုင်းကိုပေးထားသည်။ အသံအမိန့်များ၊ ဝစ်ဂျက်များနှင့်အခြားအရာများမှတစ်ဆင့်အလုပ်များကိုထပ်မံခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းကိုအခမဲ့ download ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် version အပြည့်အစုံကတော့ယူရို ၂.၉၉ ပါ။
ရေးသားသူ: Splend Apps ကပ
နှင့်အတူ Todoist, 2Do သည်အပြည့်စုံဆုံးအလုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုအက်ပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ထို့အပြင်၎င်းတွင်အရေးကြီးသည့်အားသာချက်တစ်ခုရှိပါသည်။ ၎င်းသည်စျေးသိပ်မကြီးသော်လည်းသင်အတွက်၎င်းကိုတစ်ကြိမ်သာပေးရမည်။ ၎င်းသည်ကိရိယာမျိုးစုံရှိပြီးသင်၏သတင်းအချက်အလက်ကိုမိုးတိမ်မှတဆင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်သည်။ နေ့စွဲ၊ တည်နေရာစသည်ဖြင့်အလုပ်များ၊ လက်ခွဲများ၊ စီမံကိန်းများ၊ သတိပေးမှုအမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ပူးတွဲဖိုင်များ၊ အညွှန်းများထည့်နိုင်သည်။
2Do သည်သင်၏အလုပ်များကိုစီမံရန်လုံးဝကွဲပြားသောချဉ်းကပ်မှုကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်အလွန်အမင်းအသုံးပြုရလွယ်ကူသောအင်တာဖေ့စ်နှင့်ကျယ်ပြန့်ပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အစွမ်းထက်သောအင်္ဂါရပ်များဖြင့်သင့်အတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သောသင်၏ဘဝကိုအာရုံစူးစိုက်စေသည်။ 2Do ကိုအသုံးပြုရန်မှားယွင်းသောနည်းလမ်းမရှိပါ။ အခြားအိမ်စာအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်၎င်းသည်သင့်အားတာဝန်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်သင့်အားအတင်းအကျပ်မပြုပါ။
Google Play Store တွင် TickTick, Task, Trello, GTasks နှင့်ရှည်လျားသောအရာများကဲ့သို့သော Android အတွက်အလုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအသုံးချပရိုဂရမ်များများစွာရှိသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်မှုအတိုများဖြစ်သည်။ သင်၏နေ့စဉ်အသက်တာတွင်မည်သည့်အရာကိုသင်အသုံးပြုသနည်း။ ၎င်းကိုအကောင်းဆုံးဟုအဘယ်ကြောင့်ယူမှတ်သနည်း?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » သင်၏ Android မှအလုပ်များကိုစီမံရန်အကောင်းဆုံး application များ
Android 7.1.2 ၏ဒုတိယ beta ကို Nexus 6P နှင့် Pixel C တို့အတွက်သတင်းပို့သည်